खेल कार एक बेडा अथवा भाडा कार थिएन कि बनाउन
त्यो सवारी साधन एक बुरा दुर्घटना मा गरिएको छ भने जाँच गर्न कसरी
कुराहरूमा सुझाव तपाईंको अर्को वाहन खरिद गर्नु अघि जाँच गर्न
मोटरसाइकल अनि एटीवी Vin नम्बर जाँच अनि मोटरसाइकल इतिहास रिपोर्ट
एक प्रयोग मोटरसाइकल वा प्रयोग एटीवी खरीद एक प्रयोग कार खरीद गर्न यस्तै छ, तपाईं सबै भन्दा राम्रो सम्झौता संभव पाइरहेका छन् भनेर पक्का गर्न जाँच गर्न चाहनुहुन्छ कि केही कुराहरू छन्. यो मोटरसाइकल इतिहास जाँच प्रक्रिया को एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो. एक मोटरसाइकल VIN जाँच गरिरहेको किन एउटा व्यक्तिगत देखि बाइक खरिद अघि यो त धेरै महत्त्वपूर्ण छ. शायद जाँच गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू मध्ये बाइक चोरी शिकार छैन छ. यो बारेमा सोच्नुहोस्,2मान्छे बाइक सम्म पुल र एक छनौटको ट्रक को पछाडि मा यो फेंक र सेकेन्ड मा यो संग गएका सकिन्छ. मान्छे सधैं इमानदार छैनन्, विशेष गरी समस्या संग पनि बाइक वा एटीवी मा liens र एक मोटरसाइकल VIN जाँच भएको आफूलाई बचाउन मदत गर्नेछ.
यहाँ एक मोटरसाइकल Vin जाँच प्राप्त
एक मोटरसाइकल वाहन पहिचान नम्बर यो कि बाइक गर्न अनुपम छ र कारखाना मा बाइक मा stamped छ भन्ने तथ्यलाई मा कार र ट्रक जस्तै पनि छ. यो VIN सामान्यतया फ्रेम को सामने मा stamped छ, सामान्यतया घाँटी वरिपरि वा कहीं पहिचान उद्देश्यको लागि हेर्न सजिलो छ कि, र पनि कहिलेकाहीं कहीं इन्जिन मा. तपाईं सबै फ्रेम मा एक VIN नम्बर पाउन सक्दैन भने, हामी तपाईं सम्पूर्ण कि विशेष बाइक दूर रहन भनेर सुझाव थियो. यो बाइक salvaged हुन सक्छ वा एक बिंदु totaled गरिएको हुन सक्छ.
विगतमा मा बाइक स्वामित्व छ जो तपाईं बाहिर एक मोटरसाइकल VIN जाँच गरेर, र बाइक विरुद्ध liens को ऋणदाता देखि या संभवतः एक मिस्त्री देखि छन् भने. यो बाइक किन्दा अघि तपाईं पनि यो बाइक बीमा गर्न खर्च हुनेछ कति लागि उद्धरण प्राप्त गर्न बीमा कम्पनीहरु गर्न VIN नम्बर दिन सक्छ.
यो बाइक वा एटीवी चोरी छैन भन्ने मोटरसाइकल VIN जाँच पनि निर्धारण र निश्चित बनाउन तपाईंलाई मदत गर्नेछ. तपाईं चोरिएको मोटरसाइकल VIN जाँच गर्न अर्को तरिका आफ्नो स्थानीय प्रहरी विभाग संग जाँच गर्न छ. यो समय को सबैभन्दा तिनीहरूले तपाईं सम्पूर्ण निःशुल्क preform हुनेछ भनेर एक सेवा छ, तपाईं विभाग तल टाउको पहिले तपाईं गरेको जाँच गर्न एक नियुक्ति छुट्याउने गर्न सक्छ किनभने तर कल. तपाईं पनि आफ्नो स्थानीय DMV संग जाँच गर्न सक्छन्, तिनीहरूले जाँच गर्नु तपाईं एउटा सानो शुल्क चार्ज सक्छ हुनत.
Lastly, तपाईं रुचि भनेर बाइक पाउन र तपाईं यसलाई मा एक प्रतिवेदन निकालयो जब, तपाईं बाइक लागि नगद हात वा एटीवी सुनिश्चित पहिले कि मा VIN नम्बर फ्रेम शीर्षक मा VIN नम्बर मिल्न.